Shily: “Ao amin’ny Dicom aho” Lahatsary vaovao momba ny zon’ny mpamorona sy ny fahalalahana maneho hevitra · Global Voices teny Malagasy
Shily: “Ao amin'ny Dicom aho” Lahatsary vaovao momba ny zon'ny mpamorona sy ny fahalalahana maneho hevitra
Voadika ny 12 Avrily 2019 3:38 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Septambra 2012 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Fanamarihana: Navoaka tamin'ny teny Espaniôla ny lahatsoratra ôrizinaly nosoratan'i Derechos Digitales ary nadikan'i Silvia Viñas .
Ny fanamarihan'ny mpandika [ho amin'ny teny anglisy] : Sampan-draharaha manadihady ny fampindramam-bola ao Shily izay an'ny Equifax ny Dicom . Matetika ampiasain'ireo Shiliana hilazana fa tsy nahaloa trosa izy ireo ny teny hoe “estoy en Dicom” [Ao amin'ny Dicom aho] .
Tena manabe amin'ny fahatakarana ny mety ho fiantraikan'ny famoronana ara-tsaina amin'ny fahalalaham-pitenenana ny trangan'ny sarimihetsika “Ao amin'ny Dicom aho”. Nahitana raharaha ara-pitsarana roa mahaliana ilay tranga: voalohany, mikasa ny hanala ny sehatra estoyendicom.cl ny Equifax, ilay orinasa izay tompon'ny Dicom, satria voalaza fa mangalatra ny vokatry ny mpanjifa ilay sarimihetsika. Saingy avy eo, araka ny filazan'ny orinasa, efa misy ny “Ao amin'ny Dicom aho” satria voalaza fa anaran'ny asasoratra izay efa voaraikitry ny mpiasan'ny Equifax izy io teo aloha.
Mikendry mazava ny hanakana ny fivoarana sy ny famoahana ilay sarimihetsika amin'ny fomba rehetra ireo tranga roa ireo.
Ato amin'ity lahatsary vaovao avy ao amin'ny fanentanana #NoTemasaInternet (“Aza matahotra Aterineto”) ity, milaza amintsika ny antony tsy atahoran'izy ireo ny aterineto ireo namolavola ny sarimihetsika “Ao amin'ny Dicom aho” , tamin'ny famariparitana ireo raharaha ara-pitsarana sy ny fomba, na dia eo aza ny fikasan'ny Equifax, hatokisan'izy ireo ny zon'izy ireo haneho ny fahalalaham-pitenenana izay mandresy ny fitakian'ny zon'ny mpamorona voalaza ao amin'ity raharaha ity.
Tantaran'ny Shily farany
06 Aogositra 2021Amerika Latina
Vehivavy ao Shily nahatsangana vondrom-piarahamonina mahomby amin'ny alalan'ny radio
31 Mey 2021Fifidianana
An-tsary: Mandatsa-bato ho an'ny hoaviny vaovao ny Shiliana
20 Febroary 2021Amerika Latina